Toriteny Alahady 31 Jolay 2016 | FJKM Amboniloha
Toriteny Alahady 31 Jolay 2016
Jeremia 1,1-9 / Jaona 21,15-19 / I Koritiana 3,1-9
Famaranana ny loha hevitra hoe ‘Mpiara – miasa amin’ny Tompo ny mino” androany .
Hohalalinina amin’ny alalan’izao perikopa izao ny fanontanina hoe “ Inona no andrasana amiko amin’ny maha mpiara miasa amin’ny Tompo ? » . Ny Jaona 21,15-19 no hitondra antsika ho amin’ny fampianarana .
Hafatra 1 : Mampidi –doza ny fiverenan-dalana na ny fihemorana amin’ny asa fanompoana.
Niverina ho amin’ny asa fanaony andavan’andro Petera satria very fanantenana ny amin’i Jesoa izay nitokiany, menatra satria nahantona tamin’ny hazo. Nanarato nandritra ny alina Petera nefa tsy nahomby mihitsy. Nony avy jniresaka tamin’I Jesoa anefa izy dia gaga fa saiky tsy zaka nobataina ny harato fa feno trondro.
Tsy ny fiainany andavan’andro ihany no nitahian’I Jesoa an’I Petera fa naveriny ho amin’ny anjara asa fanompoana izy “fahano ary ny ondriko, andraso ary ny ondriko”
Na inona na inona mety ho sakana sy maha kivy amin’ny fianana andavan’andro na ny fiainam-panompoana ; ataovy ho zava-dehibe ny andraikitra napetraky ny Tompo taminao, mikolokolo ny fiainam-panahin’ny Fiangonana ary mampandroso azy amin’ny lafiny rehetra (I Koritiana 3,1-9)
Hafatra 2 : Ampianarina hanararaotra ny andro nomen’Andriamanitra isika raha mbola tanora
Na dia mbola zaza aza Jeremia, dia nantsoina ho mpitondra Tenin’Andriamanitra. Petera kosa mbola tanora dia nantsoina ho mpiara-miasa akaiky tamin’i Jesoa.
Ampiasao hanompoana an’Andriamanitra ny hery, tanjaka, fahaizana amam-pahalalana nampindramina anao. Aoka tsy ho lany andro amin’ny fifanenjehana sy ny fanomezan-tsiny. Miasà amin’ny tahotra sy ny hovitra. Bitsika mangina ataon’I Jesoa amiko sy aminao “ Moa tia ahy va ianao ? Fahano, andraso ny ondrin’Andriamanitra » .
Ho avy Jesoa hitsara ny velona sy ny maty, tanteraho ny fanompoanao, ka raha ho tonga ny andro hiatrehana ny fitsarana dia ho isan’izay antsoin’I jesoa hoe “Ry mpanompo tsara sady mahatoky, midira amin’ny fifalian’ny Tomponao”
ANDRIANARISOA Hajaniaina Célestin,
Mpitandrian FJKM Amboniloha
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 4 août 2016